Mpandray anjara fototra mandritra ny atrikasa ny sampandraharahan’ny Firenena mikambana momba ny Sakafo sy ny Fambolena( FAO), ny Vondrona Eoropeanina, ary ireo vondron’ny mpiompy sy mpanjono makamba eto Madagasikara miampy ireo mpisehatra eo amin’io lalam-pihariana io. Manana anjara toerana azo tsapain-tanana amin’ny toekarena ny jono makamba satria miantoka ny 55%-n’ny fanondranana hazandrano eto Madagasikara. Mila fomba fitantanana matipaika izy mba ho lasa fidiram-bola maharitra ka izany no anton’izao atrikasa izao. Tsiahivina fa niakatra ny vokatra saingy nihena kosa ny halehiben’ny makamba raha oharina ny tamin’ny herintaona. Mbola anatina krizy tanteraka ny lalam-pihariana makamba ny sehatra jono amin’ny ankapobeny. Olana ny fahapotehan’ny tontolo iainana sy ny fiovaovan’ny toetr’andro izay manimba hatrany ny vokatra makamba tahaka ny fahapotehan’ny alahonko (mangroves). Ankoatra izay dia ilaina ny fandraisana andraikitra amin’ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ataon’ireo mpifindrafindra toerana matetika.